Saawwan Ugaandaa waraqaa ragaa dhalootaa argachuuf - BBC News Afaan Oromoo
Saawwan Ugaandaa hundaaf waraqaan ragaa dhalootaa kennamuufiif akka jiru himame.
Gaazexaan 'Daily Monitor' jedhamu akka gabaasetti, saawwaniif waraqaalee raga kan dhalootaa baasuun kan barbaachiseef, akka Danbiiwwan Gamtaa Awuroppaan (EU)n barbaadutti saawwan kan haala salphaa ta'een hordofuun akka danda'amu ulaagaalee guutuuf jedhameeti.
Biyyoonni nyaata omishanii gabaa Awurooppaaf dhiyeessan ragaa ittiin madda omishaa duukaa bu'uun hordofuun danda'amuu dhiyeessuun dirqama jedhan Ministirri Qonnaa, Industirii Beyladaafi Qurxummii Obbo Vincent Ssempijja.
Omishawwan Ugaandaa irraa dhiyaatan saamamaafi EU irraa dhorkamaa turaniiru jedhan aanga'aan kun.
"Qonnan bultoonni galmaa'uun omishawwan isaanii koodii ittiin adda baasan (barcodes) kennameefii yoo rakkoon saanduuqa tokko irratti argame, madda isaa hordofanii rakkoo uumame adda baasu," jedhan.
"Qonnaan bultoonni yoo galmaa'uu didan gabaa bu'a qabeessa ta'e kana keessa galuu hin danda'anis," jechuun ibsan.
Akaakuun omisha qonnaa gara garaa gabaa Gamtaa Awurooppaatiif dhiyaatan ulaagaan guutuu qaban hedduudha.
Gamtaan Awurooppaa keessumaa nageenyaafi qulqullina nyaataa irratti ulaagaalee baayyee cimaa ta'e qaba.
Kanaaf, qonnaan bulaas ta'e daldalaan omisha isaa gabaa Awurooppaatiif dhiyeeffachuu yaadu, ulaagaaleen guutuu qabu keessaa: omisha duukaa bu'uun hordofuun danda'amuu, qulqullinaafi to'annoo sirrii qabu; kan sirriitti maqaan moggaafameefii mallattoo daldalaa beekamaa qabu, akkasumas waraqaa ragaan mirkanaa'e ta'uudha.
Moggaasa maqaa Oromoo durii hanga ammaa
Namtichi ganna 27f kophaasaa bosona keessa jiraatee, attamiin dandamate?
Tigraay barattoota yunvarsiitii naannoo Amaaraatti akka hin ergine beeksise
Paartileen mormituu Eertiraa dubbii MM Abiyyiitti mufanne jedhan
Magaalaa Maqaleetti hiriirri mormii taasifamuuf ture dhorkame
Humnoonni nagaa federaalaa Naannoo Amaaraatti bobba'uufi
Gaazexeessituu ulfa baasuun himatamte dhiifamaan gadhiifamte
Lammiileen Itoophiyaa 400 Sa'uudiirraa gara biyyatti deebi'an
Taanzaaniyaan kondomii miliyoona 30 alaa galchite